နူးကမ့်ဆိုတာက ဆမ်ဘာတေးသွားတွေ ချိုမြိန်စွာ အမြဲတမ်းလွင့်ပျံနေတဲ့နေရာ
3 Aug 2018 . 2:20 PM
ဘာစီလိုနာအသင်းဆိုတာ ဘရာဇီးလ်ကစားသမားတွေအတွက် အောင်မြေတစ်ခုလို့ ဆိုရမလား။ နူးကမ့်မြေကို ခြေချခဲ့ဖူးတဲ့ ဘရာဇီးလ်ကစားသမား အတော်များများက ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်စာရင်းထဲမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြခံခဲ့ရတဲ့အထိကို စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ Hit မဖြစ်ဘဲ Miss ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတချို့တော့ ရှိကောင်းရှိတာပေ့ါ။ အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းက ဘရာဇီးလ်ကစားသမားတွေ ပိုပြီး ခေါ်ယူလာတာကို ပရိသတ်တွေ သတိပြုမိမယ်။
ဒီနွေရာသီမှာဆိုရင် အာသာ Arthur ၊ မဲလ်ကွန် Malcom တို့ကို ခေါ်ယူခဲ့သလို ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်း မာလွန်ဆန်းတို့စ် Marlon Santos ၊ ပေါ်လင်ဟို Paulinho ၊ ကော်တင်ဟို Coutinho စတဲ့ကစားသမားတွေက နူးကမ်းမြေကို စတင် ခြေချခဲ့တယ်။
သမိုင်းကြောင်းအရပြောရရင်တော့ ဒီနေ့အချိန်အထိ ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ဘရာဇီးလ်ကစားသမား (၃၅)ဦးအထိ ကစားခဲ့/ကစားနေကြပြီး အခုနောက်ဆုံး ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်သစ်တွေဖြစ်တဲ့ ဆမ်ဘာတွေကတော့ အာသာ၊ မဲလ်ကွန်တို့ပါပဲ။ သူတို့မတိုင်ခင် ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့အတူ အောင်မြင်မှုတွေရယူခဲ့ကြတဲ့ ဆမ်ဘာ နောင်တော်ကြီးတွေအကြောင်းကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ဟိုးအရင်တုန်းကတော့ နူးကမ့်မြေက ဆမ်ဘာတွေအတွက် မဟုတ်ခဲ့ဘူး။
၁၉၃၀ ကနေ ၁၉၉၀ ခုနှစ်လောက်အထိ ဆမ်ဘာတေးသွားတွေက သိပ် မချိုမြိန်ခဲ့ပါဘူး။ ဘရာဇီးလ်ကစားသမားတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို စတင် မြှင့်တင်ပေးခဲ့တာက ဘရာဇီးလ်ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူးကြီး ရိုမာရီယို Romario ပါပဲ။ ၁၉၉၃ ကနေ ၁၉၉၅ အထိကစားခဲ့ပြီး အဲဒီကာလအတွင်း ဘရာဇီးလ်အသင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သလို ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် (၈၂)ပွဲကစား၊ (၅၃)ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့အပြင် လာလီဂါချန်ပီယံဆု ဆွတ်ခူးခဲ့တယ်။ ဘရာဇီးလ်တွေရဲ့ ရွှေရောင်ကာလကို အနားထပ်ကွန့်ပေးတာက ရော်နယ်လ်ဒို Ronaldo ပါ။
၁၉၉၆-၉၇ တစ်ရာသီသာ ကစားခဲ့ရပေမယ့် ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့သွင်းဂိုးတွေ၊ ပဉ္စလက်ဆန်တဲ့ကစားဟန်တွေက အခုအချိန်အထိ ပြောစမှတ်ဖြစ်နေဆဲပဲ။ နောက်တစ်ယောက်က ရီဗယ်လ်ဒို Rivaldo ။ ဟာသဆန်ဆန်ပြောရရင်တော့ Rနဲ့စတဲ့ ကစားသမား တွေက ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ဘရာဇီးလ်တွေရဲ့ ခေတ်သစ်တစ်ခုကို စတင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ ရော်နယ်လ်ဒင်ဟို Ronaldinho ခေတ်မှာ ဘာစီလိုနာအတွက် အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုတွေ ဆုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက် ရီးယဲလ်ကို နောက်ကောက်ချနိုင်ခဲ့လို့ပဲ။ ရော်နယ်လ်ဒင်ဟိုလောက် Hit မဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်လက်တီ Belletti ၊ ဆယ်လ်ဗင်ဟို Sylvinho ၊ အက်ဒ်မီလ်ဆင် Edmilson တို့ကလည်း ဘာစီလိုနာရဲ့အောင်မြင်မှုမှာ ဒေါက်တိုင်တွေအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။
နောက်ထပ် ဆမ်ဘာတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဒန်နီအဲလ်ဗတ်စ် Dani Alves ၊ မက်ဇ်ဝဲလ် Maxwell တို့အပြင် အခု PSG ကစားသမား နေမာ Neymar တို့ခေတ်အထိ နူးကမ့်ကွင်းမှာ ဆမ်ဘာတေးသံတွေက ဖုံးလွှမ်းထားခဲ့တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ဘာစီလိုနာအသင်း ဥရောပအောင်မြင်မှုနဲ့ နည်းနည်းအလှမ်းဝေးနေပေမယ့် ပေါ်လင်ဟို Paulinho ၊ ကော်တင်ဟို Coutinho တို့ကလည်း ပြည်တွင်းအောင်မြင်မှုတွေအတွက် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။
အခုအချိန်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းက ဆမ်ဘာမျိုးဆက်သစ်တွေဖြစ်တဲ့ မဲလ်ကွန်၊ အာသာ၊ မာလွန်ဆန်းတို့စ် တို့လို ကစားသမားတွေနဲ့ နောက်ထပ် ခေတ်သစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့ ခြေလှမ်းပြင်နေပြီ။ ရှေ့က နောင်တော်ကြီးတွေ ရယူခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုမျိုး အခု မျိုးဆက်သစ်တွေလက်ထက်မှာ ပြန်လည်ရယူနိုင်မလားဆိုတာကတော့ . . . .
Photo:Youtube,AFP,AS,Ekow Asmah Sports,Eurosport
နူးကမျ့ဆိုတာက ဆမျဘာတေးသှားတှေ ခြိုမွိနျစှာ အမွဲတမျးလှငျ့ပြံနတေဲ့နရော
ဘာစီလိုနာအသငျးဆိုတာ ဘရာဇီးလျကစားသမားတှအေတှကျ အောငျမွတေဈခုလို့ ဆိုရမလား။ နူးကမျ့မွကေို ခွခေခြဲ့ဖူးတဲ့ ဘရာဇီးလျကစားသမား အတျောမြားမြားက ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျစာရငျးထဲမှာ ထညျ့သှငျးဖျောပွခံခဲ့ရတဲ့အထိကို စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခွှငျးခကျြအနနေဲ့ Hit မဖွဈဘဲ Miss ဖွဈခဲ့တဲ့ ကစားသမားတခြို့တော့ ရှိကောငျးရှိတာပေ့ါ။ အခုနောကျပိုငျးနှဈတှမှော ဘာစီလိုနာအသငျးက ဘရာဇီးလျကစားသမားတှေ ပိုပွီး ချေါယူလာတာကို ပရိသတျတှေ သတိပွုမိမယျ။
ဒီနှရောသီမှာဆိုရငျ အာသာ Arthur ၊ မဲလျကှနျ Malcom တို့ကို ချေါယူခဲ့သလို ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီကလညျး မာလှနျဆနျးတို့ဈ Marlon Santos ၊ ပျေါလငျဟို Paulinho ၊ ကျောတငျဟို Coutinho စတဲ့ကစားသမားတှကေ နူးကမျးမွကေို စတငျ ခွခေခြဲ့တယျ။
သမိုငျးကွောငျးအရပွောရရငျတော့ ဒီနအေ့ခြိနျအထိ ဘာစီလိုနာအသငျးမှာ ဘရာဇီးလျကစားသမား (၃၅)ဦးအထိ ကစားခဲ့/ကစားနကွေပွီး အခုနောကျဆုံး ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ တပျဖှဲ့ဝငျသဈတှဖွေဈတဲ့ ဆမျဘာတှကေတော့ အာသာ၊ မဲလျကှနျတို့ပါပဲ။ သူတို့မတိုငျခငျ ဘာစီလိုနာအသငျးနဲ့အတူ အောငျမွငျမှုတှရေယူခဲ့ကွတဲ့ ဆမျဘာ နောငျတျောကွီးတှအေကွောငျးကို ဗဟုသုတအနနေဲ့ ဖျောပွခငျြပါတယျ။ ဟိုးအရငျတုနျးကတော့ နူးကမျ့မွကေ ဆမျဘာတှအေတှကျ မဟုတျခဲ့ဘူး။
၁၉၃၀ ကနေ ၁၉၉၀ ခုနှဈလောကျအထိ ဆမျဘာတေးသှားတှကေ သိပျ မခြိုမွိနျခဲ့ပါဘူး။ ဘရာဇီးလျကစားသမားတှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍကို စတငျ မွှငျ့တငျပေးခဲ့တာက ဘရာဇီးလျဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူးကွီး ရိုမာရီယို Romario ပါပဲ။ ၁၉၉၃ ကနေ ၁၉၉၅ အထိကစားခဲ့ပွီး အဲဒီကာလအတှငျး ဘရာဇီးလျအသငျးနဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဖွဈခဲ့သလို ဘာစီလိုနာအသငျးအတှကျ (၈၂)ပှဲကစား၊ (၅၃)ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့အပွငျ လာလီဂါခနျြပီယံဆု ဆှတျခူးခဲ့တယျ။ ဘရာဇီးလျတှရေဲ့ ရှရေောငျကာလကို အနားထပျကှနျ့ပေးတာက ရျောနယျလျဒို Ronaldo ပါ။
၁၉၉၆-၉၇ တဈရာသီသာ ကစားခဲ့ရပမေယျ့ ရျောနယျလျဒိုရဲ့သှငျးဂိုးတှေ၊ ပဉ်စလကျဆနျတဲ့ကစားဟနျတှကေ အခုအခြိနျအထိ ပွောစမှတျဖွဈနဆေဲပဲ။ နောကျတဈယောကျက ရီဗယျလျဒို Rivaldo ။ ဟာသဆနျဆနျပွောရရငျတော့ Rနဲ့စတဲ့ ကစားသမား တှကေ ဘာစီလိုနာအသငျးမှာ ဘရာဇီးလျတှရေဲ့ ခတျေသဈတဈခုကို စတငျခဲ့တယျလို့ ဆိုရမယျ။
ဘာဖွဈလို့လဲတော့ ရျောနယျလျဒငျဟို Ronaldinho ခတျေမှာ ဘာစီလိုနာအတှကျ အမွငျ့ဆုံးအောငျမွငျမှုတှေ ဆုပျကိုငျနိုငျခဲ့ပွီး သူတို့ရဲ့အဓိကပွိုငျဘကျ ရီးယဲလျကို နောကျကောကျခနြိုငျခဲ့လို့ပဲ။ ရျောနယျလျဒငျဟိုလောကျ Hit မဖွဈပမေယျ့ ဘယျလကျတီ Belletti ၊ ဆယျလျဗငျဟို Sylvinho ၊ အကျဒျမီလျဆငျ Edmilson တို့ကလညျး ဘာစီလိုနာရဲ့အောငျမွငျမှုမှာ ဒေါကျတိုငျတှအေဖွဈ ပါဝငျခဲ့ကွတယျ။
နောကျထပျ ဆမျဘာတှဖွေဈကွတဲ့ ဒနျနီအဲလျဗတျဈ Dani Alves ၊ မကျဇျဝဲလျ Maxwell တို့အပွငျ အခု PSG ကစားသမား နမော Neymar တို့ခတျေအထိ နူးကမျ့ကှငျးမှာ ဆမျဘာတေးသံတှကေ ဖုံးလှမျးထားခဲ့တယျ။ အခုနောကျပိုငျးနှဈတှမှော ဘာစီလိုနာအသငျး ဥရောပအောငျမွငျမှုနဲ့ နညျးနညျးအလှမျးဝေးနပေမေယျ့ ပျေါလငျဟို Paulinho ၊ ကျောတငျဟို Coutinho တို့ကလညျး ပွညျတှငျးအောငျမွငျမှုတှအေတှကျ အဓိက အခနျးကဏ်ဍမှာ ပါဝငျခဲ့တယျ။
အခုအခြိနျမှာ ဘာစီလိုနာအသငျးက ဆမျဘာမြိုးဆကျသဈတှဖွေဈတဲ့ မဲလျကှနျ၊ အာသာ၊ မာလှနျဆနျးတို့ဈ တို့လို ကစားသမားတှနေဲ့ နောကျထပျ ခတျေသဈတဈခုကို တညျဆောကျဖို့ ခွလှေမျးပွငျနပွေီ။ ရှကေ့ နောငျတျောကွီးတှေ ရယူခဲ့တဲ့ အောငျမွငျမှုမြိုး အခု မြိုးဆကျသဈတှလေကျထကျမှာ ပွနျလညျရယူနိုငျမလားဆိုတာကတော့ . . . .